Nidaamka hal abuurka ee qaabeynta astaanta | Abuurista khadka tooska ah
Markaan tixgelinayno qaabeynta astaanta, aad ayey muhiim u tahay inaan ogaanno sida loo isticmaalo ilaha habboon oo aan kuu sharaxo. Astaantu kama badna ama ka yaraan karto matalaadda garaafka ee aqoonsiga meherad ama shirkad nooc kastoo ay tahayba. Tani waa sababta ay muhiim u tahay inaan baranno dhisida sumad la jaanqaadaysa qiimayaasha aasaasiga ah, taariikhda iyo dhalashada shirkadda la sheegay. Mar alla markaan ka helno dhammaan macluumaadka macmiilkeenna oo aan si dhab ah u ogaanno waxa aan dooneyno inaan ka hadalno iyada oo loo marayo luuqadda muuqaalka iyo waxa saxda ah ee aan dooneyno inaan u sheegno, waxaa la joogaa xilligii la geyn lahaa geedi socod hal abuur leh oo nagu hoggaaminaya qaaciddada ugu habboon. Marka la soo koobo, waxaan ku dhex milmay hoosta hoose ee shaqadeena yar hadana waa goorta ay tahay inaan sameyno kheyraadkeena cod sii.
Waxaan ku baari karnaa diiwaanno kala duwan, tonic iyo ururada. Tani waxay noqon doontaa arrin tijaabo ah iyo khalad macno ahaan markaa waa inaadan niyad jabin haddii kadib markaad fuliso geedi socodka hal abuurka ma aadan helin xalka aad raadineysay. Maanta waxaan dooneynaa inaan ku istaagno marxaladan howsha waxaanan dooneynaa inaan kuu soo bandhigno alaab hubaal waxtar iyo dhiirigelin u noqon doonta xirfaddaada naqshadeeye Hoos waxaan ku soo aruurineynaa xulashooyin geedi socod ah kaas oo lagu soo saaray shirkad iyo aqoonsi muuqaal ah ee mashaariic kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Nidaamka hal abuurka ee qaabeynta astaanta: tusaalooyin wax ku ool ah oo aad u baahan tahay inaad ogaato
istuudiyaha naqshadeynta garaafka dijo
Astaamo aad u fiican, oo si aad u wanaagsan loo sharaxay sida loogu tago. Way fiicantahay in la arko shaqadaas wanaagsan.
Ka jawaab istuudiyaha naqshadeynta garaafka
Waan jeclaaday kala guurka, waxay umuuqdaan kuwa heer sare ah.
Runtii waan jeclaaday, waxbarashana kiciyay mala awaalka.
Jawaab ku bixi Marco Antonio Camarena Pascual
Ku jawaab Azucena ortega